Monday June 29, 2020 - 12:37:32 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Boqolaal qof ayaa ku dhintay qaraxyo sodonkii maalmood ee lasoo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacayay galbeedka iyo bartamaha wadanka Liibiya.
Warbixin cusub oo kasoo baxday waxa loogu yeero Q.Midoobay ayaa lagu sheegay in dad ka badan 100 qof oo rayid ah ay ku dhinteen qaraxyo ka dhashay miinooyin uu Khaliifa Xaftar ku aasay galbeedka Liibiya.
Dadka ku dhintay miinooyinka oo u badnaa haween iyo carruur ayaa isku dayayay in ay dib ugu laabtaan guryahooda oo kuyaal magaalooyin laga saaray maleeshiyaadka Xaftar balse waxay ku dhaceen bohollo miinooyin lagu aasay.
Tobanaan qof ayaa lixdooda lixaad ku waayay miinooyinka nuuca dhulka lagu aasa ah oo dowladda Ruushka ay ugu deeqday Xaftar.
Afhayeen u hadlay xukuumadda Alwifaaq ee aqoonsiga caalmiga ah haysata ayaa ku eedeeyay Xaftar in uu shacabka rayidka ah ka aargoosanayo kadib markii guuldarrooyin is xigxiga lagu gaarsiiyay furimaha dagaalka.
Dhinaca kale maleeshiyaad calooshood ushaqeystayaal ah ayaa lagu xoojiyay difaacyada ciidamda Khaliifa Xaftar ay ku leeyihiin hareeraha magaalooyinka Sirta iyo Aljafrah ee dhaca bartamaha Liibiya.
Warbaahinta maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ayaa soo wariyay in boqolaal maleeshiyaad ah oo laga keenay wadamada Jaad iyo Masar ay gaareen Sirta si ay uga barbar dagaallamaan Khaliifa Xaftar.
Ruushka iyo xulufadiisa Imaaraatka Carabta ayaa doonaya in ay si adag udifaacdaan ceelasha shidaalka Liibiya oo maalin walba ay si bilaash ah uga daabushaan boqolaal kun oo Barmiil nafta ah.